Ikhwalithi, iwaranti nokubuyela ku-BlackBerry. Izinkokhelo ezivikelekile kanye nokuvikelwa komthengi — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Ikhwalithi, iwaranti nokubuyela ku-BlackBerry. Izinkokhelo ezivikelekile kanye nokuvikelwa komthengi
Ikhwalithi yomkhiqizo BlackBerry
Amakhasimende othandekayo, sikhathalela ngokukhethekile izinga lemikhiqizo esikunikeza yona.
Mhlawumbe abaningi bakho kakade ukuthi umkhiqizo weBlackBerry ngokwawo awusona isiqinisekiso semfanelo, ngoba manje ungathenga amafake ezesekeli kumadivayisi we-BlackBerry ezitolo ze-intanethi nakwezimakethe, ngaphandle kokungazi ngakho, ne-— "inkinga" ye-smartphone . Ngesikhathi esifanayo, kuphela ochwepheshe ongahlukanisa izimpahla ezingekho esimweni esifushane ukuthenga, isibonelo esihle salokhu yi— ukuthenga ibhethri . Futhi emva kwesikhashana ukudumazeka kuza, futhi ukudumazeka kusuka izinga eliphansi kuthatha isikhathi eside kunenjabulo yentengo ephansi.
Ikhwalithi ye-InfoVsolutions yenkampani — kuqala. Sakhetha abahlinzeki base-USA naseYurophu ngezinsiza zeBlackBerry; abakhiqizi bezingxenye zangempela zezingxenye zeBlackBerry; futhi unikeze izinga eliphezulu lensizakalo, kusukela eselulekheni iseluleko sokuhambisa ngeposi.
Inqubomgomo yethu yilezi: ukukhombisa ngokucacile umsuka nomkhiqizi, ukwabelana ngezimpahla zangempela nezimpahla-amakhophi, amasha ne- used goods , nokunikeza umthengi ithuba lokuzikhethela ngokusekelwe kolwazi oluphelele.
Iwaranti nenkonzo yesiqinisekiso, ukubuyiselwa kwempahla yekhwalithi enganele
Kunoma yikuphi, ngisho nokukhiqizwa okuphelele, kungenzeka kube nomkhiqizo onokukhubazeka, okunye okutholakele ngemva kokuthenga, ngesikhathi sokusebenza. Ezimweni ezinjalo, kokubili thina nomthengi siqondiswa ngumthetho weRussia Federation kanye nomthetho othi "Ekuvikeleni Amalungelo Abathengi", kodwa kwezinye izimo umthetho awukho ohlangothini lomthengi, ngisho nomshado ocacile ovela kumenzi wezimpahla. Siyaqonda lokhu, futhi sizama njalo ukuxazulula izinkinga ezikhulayo ngokuthanda iklayenti.
Inqubomgomo yethu: sinikeza isiqinisekiso semikhiqizo yonke, naphezu kokuthi, ngokomthetho, uhlu lwezimpahla ngaphansi kwenkonzo yamawaranti yamahhala kunqunyelwe.
Iwaranti kuwo wonke ama-Smartphones athengwe esitolo sethu, kufaka phakathi Ukulungiswa (okubuyekeziwe) — 1 unyaka. Iwaranti ezinsizakalo ezinikeziwe, izingxenye zokuqala zokuphumula, amabhethri nezinshaja ze-— izinyanga ezingu-6, zezinhloko zekhanda, abanikazi, izintambo, ama-adapter, amakhadi omemori, izembozo, nezinye izesekeli zeBlackBerry — inyanga eyodwa. Iwaranti kuzo zonke izesekeli-amakhophi we-— inyanga eyodwa. Iwaranti yeused goods ifana neyomusha.
Uma kwenzeka i-warranty case, sizoqeda lesi sipho mahhala (sizokwenza ukulungiswa kwezimpahla), futhi uma i-— ingenakwenzeka, sizoyishintsha ngomkhiqizo ofanayo.
Sicela uqaphele ukusiza icala lewaranti:
Udinga ukuba nobufakazi bokuthenga esitolo sethu. Noma yimuphi umbhalo, hlola noma ususe ohlelweni lokukhokha. Ilahlekile noma ilahlwe? Zama ukukhumbula usuku lokuthenga, umphathi owakhonza noma olunye ulwazi olukwazi ukuqinisekisa iqiniso lokuthenga esitolo sethu.
Umkhiqizo akumelwe uwonakele ngokomzimba, utholakale emanzini, futhi akumele kube nokuphulwa kweminye imibandela yokusebenza (kuhlanganise nokusetshenziswa kwamajaja angewona angempela kanye namabhethri nezinye izesekeli nge-smartphone).
Izimpahla akufanele zivezwe ekuvuleni, imizamo yokulungiswa ngabesithathu.
Isofthiwe efakwe kudivayisi kufanele ibe esemthethweni.
Udinga ukuletha izimpahla wena ngokwakho
Uma kungenzeka, ulethe izimpahla ngokusetha okuphelele, kufaka phakathi ukupakisha, izincwadi, nezinye izesekeli ezihambisana nezimpahla.
Ngaphansi kwanoma yiziphi izimo singabekwa icala lokulahlekelwa noma ukulimala okulinganayo (kufaka konke, ngaphandle kokungalahleki, ukulahlekelwa inzuzo, ukuphazamiseka kwebhizinisi, ukulahlekelwa kolwazi lwebhizinisi noma enye idatha, noma enye ukulahlekelwa kwemali, umonakalo empilweni, noma ukulimala kwanoma yiluphi uhlobo), ehlobene nokusetshenziswa noma ukungakwazi ukusebenzisa izimpahla noma amasevisi athengiwe.
Izinhlobo ezimbili zewaranti kuma-smartphone
Ngeshwa, ezweni lanamuhla lama-Yandex-Amakethe, abathengi "baxosha" ngamanani aphansi. Kodwa khumbula ukuthi amanani aphansi ezitolo ze-inthanethi avame ukufihla imvelaphi engaziwa, amadivayisi abuyiselwe ngemuva kokukhanda, nokunqatshwa kwesevisi yewaranti.
Njengoba kufanele sincintisane nokunciphisa ukunyuka kwamanani emakethe amadivayisi weBlackBerry, futhi, ngesikhathi esifanayo, kubalulekile ukugcina izinga lekhwalithi, sikunikeza ukukhetha kwezinhlobo ezimbili zesevisi yewaranti:
Iwaranti ejwayelekile kuma-smartphone namaphilisi: gxila ekuhambisaneni nomthetho weRussia Federation mayelana nokukhishwa kwewaranti. Iwaranti evamile ngokuvamile ibonisa ukuthi ukuhleleka kwezinsimbi ezithengiswayo zokulungisa kuzokwenziwa ngokungeziwe, kwezinye izimo izibopho zewaranti zizodluliselwa ezikhungweni zenkonzo. Ngenxa yalokho, isevisi yewaranti yedivayisi izokwenziwa esikhathini eside. Iseluleko ezindabeni zezobuchwepheshe ezengeziwe ayifakiwe naku-Warrant Standard.
Iwaranti enwetshiwe kuma-smartphone namaphilisi: ukuma kwamakhasimende. Ukuzihlola nokulungiswa kuzokwenziwa ngabachwepheshe bethu bezinsizakalo zesevisi, besebenzisa izingxenye ezikhona. Kwezinye izimo (ukungasebenzi kwekhibhodi, isikrini, ikhamera noma ezinye izingxenye) isevisi yewaranti inikezwa phakathi nosuku, futhi kunoma yikuphi, isikhathi sinciphisa sibe ngangokunokwenzeka. Iwaranti enwetshiwe ihlanganisa nokucebisa amakhasimende ezindabeni ezihlobene.
Inqubomgomo yethu: ukuhlinzeka umthengi ngokukhetha insizakalo yewaranti, ngenkathi egcina ibhalansi lentengo kanye nendlela eyodwa. Kunoma yikuphi, isevisi yewaranti, ngaphansi kwezimo zewaranti , ikhululekile.
Ukubuyisa kwezimpahla BlackBerry ikhwalithi eyanelisayo
Kubuye kwenzeke ukuthi azikho izikhalazo mayelana nomkhiqizo, kodwa ushintsha ingqondo yakho, noma uthanda omunye umkhiqizo. Siyaqonda!
Inqubomgomo yethu: ungabuyisa umkhiqizo, usuwutholile intengo ephelele, noma uwushintshanisa ngomunye umkhiqizo, ucabangela umehluko emanani, noma ngabe awuhambisani nawe noma ushintshe ingqondo yakho kungakapheli izinsuku ezingu-15 kusukela ngosuku lokuthenga.
Udinga ukukhumbula ukuthi:
Udinga ukuqinisekiswa kokuthengwa esitolo sethu. Noma yimuphi umbhalo, hlola noma ususe ohlelweni lokukhokha. Ilahlekile noma ilahlwe? Zama ukukhumbula usuku lokuthenga, umphathi owakhonza noma olunye ulwazi olukwazi ukuqinisekisa iqiniso lokuthenga esitolo sethu.
Isethulo sezimpahla sasilondolozwe ngokuphelele futhi izimpahla azizange zisetshenziswe (ukupakisha akufanele kuvulwe, amafilimu okuzivikela agcinwe, akukho monakalo, ukuphelela okuphelele).
Naphezu kweqiniso lokuthi, ngokuhambisana nomthetho "Ekuvikeleni Amalungelo Abathengi", ama-smartphones awanakushintshaniswa, kwezinye izimo, sizohlangana namakhasimende. Sicela wazise umphathi mayelana nokuthi kungenzeka kanjani isimo esinjalo kusengaphambili ngaphambi kokuthenga!
Inkokhelo yokulethwa kwanoma yiluphi uhlobo lomsebenzi nezinsizakalo ezihlobene (isibonelo, ukudluliselwa koxhumana nabo kusuka kwenye idivayisi) akubuyiselwa imali.
Wena ngokukhululeka ukuletha izimpahla emuva futhi ukhokhe ukulethwa.
Ukuphepha kokukhokha nokuthembeka kwe-oda yakho
Uphequlula isayithi lethu usebenzisa i-protocol evikelekile ye-HTTPS, bese uqinisekiswe yisiphequluli sakho (ngokuvamile isithonjana sokukhiya esivaliwe). Lokhu kusho ukuthi idatha edluliselwe phakathi kwikhompyutha yakho ne-server yethu ayikwazi ukutholwa yizinkampani zangaphandle.
Ukuphepha kwezinkokhelo ezenziwe ngesango likaPayPal, kufaka phakathi ukukhokha ngamakhadi asebhange, kuqinisekiswe yiNkampani ye-PayPal yomhlaba wonke.
Inqubomgomo yethu: ukuvikelwa kwamakhasimende — kuqala.
Amakhasimende wesifunda angaqiniseka ukuthi i-oda elikhokhelwayo lizothunyelwa ku-— uzoba nenombolo yokulandelela yepelsela. Sisebenze kusukela ngo-2009, sinesimo seLungu le-BlackBerry Associate Alliance, futhi sithole kakade impendulo enhle evela kumakhasimende. Ngaphezu kwalokho, uma ukhokha nge-PayPal, ukuthengiselana kuvikelwe yinkampani enegama lomhlaba wonke .
Ulwazi lwezomthetho mayelana ne-LLC "I-Info Solutions"; .
Impendulo yakho, iziphakamiso nezinkampani zekhwalithi yekhwalithi yesevisi
Umsebenzi wethu we-— ukukhuthaza ukuthuthukiswa komkhiqizo we-BlackBerry eRussia, ukusekela abasebenzisi bamanje bamadivayisi we-RIM BlackBerry, kanye nokweluleka labo abanesithakazelo kuphela. I-Solutions Solutions — yiyona enkulu kunazo zonke eRussia kuphela, kodwa nakwamanye amazwe, ububanzi bezesekeli zeBlackBerry, lokhu kulungiswa nokugcinwa kwama-smartphones akwa-RIM, ukulungiselelwa kweBlackBerry ngokukhethekile ngezidingo zakho, lokhu kuyizinsizakalo zekhwalithi eliphezulu nokunakekelwa kwamakhasimende. Sinikeza njalo izixazululo. Sithanda iBlackBerry.
Umbono wakho ubaluleke kakhulu kithi. Sinikeza imizamo esiphezulu ukuqinisekisa ukuthi izicelo zakho ku-Info Solutions zishiya ukubonakala okuhle, ukwenza ukuxhumana nabasebenzi kube lula futhi ngesikhathi esifanayo kubakha, ukuvakashela ikhathalogu yomkhiqizo nemiphakathi yezemidlalo —. Sisebenzela wena, ngakho-ke sikucela ukuthi usisize silandele indlela efanele yokuthuthukiswa ngempendulo, impendulo nezikhalazo.
Inqubomgomo yethu: sivulekile kuziphakamiso, kubalulekile ngathi ukuthi sithole impendulo yakho.
Kunoma yikuphi imibuzo ongase ube nayo, kanye neziphakamiso, ungaxhumana njalo ne-Quality Service ye-Info Info Solutions . Lapho usingatha, zama ukwenza umgomo. Siphatha ngokucophelela isikhalazo ngasinye.
Ungaphinde ushiye impendulo ku-Yandex.Market (ngokugunyazwa, ngaphandle kwama-akhawunti e-Yandex, ungasebenzisa i-VKontakte, Facebook, akhawunti ye-Twitter namanye amanethiwekhi omphakathi) noma ufunde izibuyekezo ezivela kwabanye abathengi.